Xildhibaanada labada aqal baarlamaanka Kenya oo la dhaariyay - BBC News Somali
Image caption Sawir Hore : Baarlamaanka Kenya oo kalfadhi leh
Waxaa soo dhamaatay dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Kenya, xili wali maxkamadda sare ay ka socoto dacwad la xiriirta muranka doorashada xilka madaxweynenimada Kenya oo ay isku hayaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga.
Saakay dhaarinta waxa ay ka bilaabatay aqalka baarlamaanka, halkaas oo xilka la dhaariyay dhammaan 290 xildhibaan ee lasoo doortay iyo 47 dumarka ah ee laga soo doortay 47-da degmo ee Kenya iyo waliba 12-ka xildhibaan ee lasoo xulay sida uu qabo sharciga Kenya.
Baarlamaanka aad ayuu uga duwanyahay baarlamaanadii hore, waxaana jira wajiyo badan oo ku cusub oo qaarkood xariiqay taariikh ku cusub dalka Kenya.
Waxaa markii ugu horeysay baarlamaanka Kenya si toos ah loogu soo doortay 22 xildhibaan oo dumar ah oo rag inta la tartamay kaga guulaystay doorashada , 18 ka mid ah dumarkaas waxa ay u tahay markii koowaad oo lasoo doorto. Waxaa ka mid ah haweenay Soomaali ah oo laga soo doortay deegaanka Ijaaraa Safiya Nuur.
Image caption Safiya Cabdi Nuur , Ijara, waxay noqotay haweenaydii koowaad ee Waqooyi Bari laga soo doortay
Xildhibaanada Soomaalida ah ee iyagu markii ugu horeysay baarlamaanka soo galay waxaa ka mid ah Bashiir Cabdullaahi oo laga soo doortay Waqooyiga Mandhera, Aadan Qalooshe oo laga soo doortay galbeedka Wajeer iyo Cabdiqaadir Cusmaan oo laga soo doortay deegaanka Faafi ee Gaarisa, waxana ay u warameen wariyaha BBC-da Bashka Jug Soo dhacay, waxayna sheegeen in ay ku faraxsanyihiin xilkooda cusub.
Image caption Xildhibaan Aadan Qaloshe, Galbeedka Wajeer.
Waxaa kale oo taariikh xariiqay wiil 23 jir ah oo magaciisu yahay John Paul Mwirigi oo noqday xildhibaankii ugu da'da yaraa baarlamaanka Kenya.
Wariyihii caanka ah ee xagga dabogalka Maxamed Cali ayaa isna ka mid ah xildhibaanada maanta la dhaariyay.
Image caption Xildhibaan Cabdiqaadir Cusmaan, Faafi, waa markii koowaad oo uu baarlamaanka soo galo
Xisbiga talada haya ee Jubillee ayaa kursiga hoggaamiyaha aqlabiyadda usoo sharaxay markale Aadan Barre Ducaale oo laga soo doorto magaalada Gaarisa.
Guddoomiyaha ururka xoogga badan ee macalimiinta Kenya Wilson Sossion ayaa ka mid noqday baarlamaanka Kenya kadib markii uu soo magacaabay xisbiga ODM ee Raila Odinga oo qoondo ku lahaa xildhibaanada 12-ka ah ee aqalka loosoo magacaabayo.
Sidoo kale waxaa baarlamaanka ka mid ah noqdey Baba Owino oo ahaa guddoomiyihii ardayda Kenya oo isaga lasoo doortay isaga oo kusoo galay xisbiga ODM.
Image caption Bashiir Cabdullaahi , Waqooyiga Mandhera, Markiisii ugu horeysay ee uu xildhibaan noqdo
Aqalka kale ee baarlamaanka Kenya ee Sanate-ka ama Aqalka Sare ayaa isna maanta la dhaariyay xildhibaanada oo ka kooban 47 xildhibaan oo laga soo doortay 47-da degmo ee Kenya, 12 dumar ah oo lasoo magacaabay , 2 xubnood oo dhalinyarada loo qoondeeyay iyo 2 loo qoondeeyay dadka naafada ah.
Dhaarinta kadib aqalka ayaa galay doorashada guddoomiyaha iyo ku xigeenadiisa oo uu sharciga ogolyahay in xitaa ay banaanka kai man karaan.
Kursiga guddoomiyaha Aqalka waxaa si adag ugu tartamay Ken Lusaka oo horey xilkan usoo qabtay iyo Faarax Macalin oo horey usoo noqday guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka.
Codbixinta kadib Lusaka waxa uu heley 40 cod, halka Faarax uu helay 23 cod, sidaasina waxa ay guushu ku raacday Ken Lusaka.
Waxaa wali socota doorashada ku xigeenada iyo xilalkale ee aqalka.